ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, कति छ आजको प्रतितोला ? – Tufan Media News
२४ जेष्ठ २०७९, मंगलवार १५:०६
काठमाडौं :सुनको मूल्य आज नेपाली बजारमा प्रतितोला ९७ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुगेको छ । सोमबार प्रतितोला ९८ हजार एक सय रुपैयाँ रहेको सुन मंगलबार ६ सय रुपैयाँले घटेको हो । तेजाबी सुनको मूल्य भने प्रतितोला ९७ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
त्यस्तै, चाँदीको मूल्य भने बढेको छ । सोमबार प्रतितोला एक हजार एक सय ६ रहेको चाँदीको मूल्य आज बढेर १ हजार दुई सय ७५ रुपैया पुगेको छ ।
यो पनि, गर्मी मौसममा घाममा पार्किङमा राखेको स्कुटी वा मोटरसाइकल चढ्दा तपाइँलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ ? निश्चय नै असहज हुन्छ । बस्नुअघि उपलब्ध भए कागज वा कपडा राख्नुहुन्छ । अझै बस्नै नसक्ने तातो भए त पानी छर्कनु हुन्छ होला । तर, तपाईले यस्तो तातोलाई कुनै नयाँ उपयोगमा प्रयोग गर्नु भएको छ त ?
अहिले गर्मी मौसम छ । तापमान बढेसँगै भारतमा नयाँ नयाँ जुक्ति लगाउन थालिएको छ । स्कुटीको सिट तातेपछि भारतीय उद्यमी हर्ष गोयन्काले डोसा (दक्षिण भारतको लोकप्रिय खानेकुरा) पकाउन प्रयोग गरेका छन् । डोसा तयार गरेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । करिब ३० हजार पटक हेरिएको भिडियोमा एक व्यक्तिले तमिलमा ‘माभु’ भनेर चिनिने डोसा दिउँसोको समयमा स्कूटरमा गोलाकार आकारमा फैलाएकाे देख्न सकिन्छ ।
भिडियो पोस्टमा धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । एक प्रयोगकर्ताले ‘नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग’ भनेका छन् भने अर्कोले “वाह ! इन्धन र कार्बन फुटप्रिन्टमा बचत । सरकारलाई मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न र मूल्य घटाउन मद्दत गर्नुहोस् ।’